Koox baastoolad ku hubaysan oo labo qof oo shacab ah ku dishay gudaha magaalada Laascaano - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKoox baastoolad ku hubaysan oo labo qof oo shacab ah ku dishay gudaha magaalada Laascaano
March 26, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Magaalada Laascaano ee gobolka Sool. [Sawirka: Puntland Mirror]
Laascaano-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof oo shacab ah ayaa lagu dilay toogashooyin xalay ka dhacay gudaha magaalada Laascaano ee gobolka Sool, sida ay warsidaha Puntland Mirror u sheegeen dadka deegaanka.
Koox aan haybtooda la aqoon oo baastoolado ku hubaysan ayaa xalay oo Sabti ahayd fiidkii dil u geysatay Jaamac Cabdi, oo ahaa nin si weyn looga yaqaan gudaha magaalada Laascaano.
Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta ka baxsadtay toogashada kadib.
Koox kale oo aan haybtooda la aqoon oo baastoolado ku hubaysan ayaa isla xalay fiidkii gudaha magaalada Laascaano ku dishay nin lagu magacaabi jiray Cabdixakiin Ducaale.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada dilalkaas khaarajinta ah ee xalay dhacay.
Magaalada Laascaano ayaa sanadadii dhawaa ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay dilal toogasho ah oo loo geystay dad rayid ah iyo masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland oo magaalada maamula, kuwaasoo gacanta ku hayay ilaa iyo 2007-dii.
March 7, 2017 Maxkamada ciidamada Puntland oo lix xubnood oo Al-Shabaab ah ku xukuntay 10 sanno oo xabsi ah
April 8, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo dil toogasho ah ku fuliyay shan xubnood oo katirsanaa ururka Al-Shabaab
Jawaari oo ka codsaday Raysulwasaare Khayre in uu dib u eegis ku sameeyo golaha wasiiradda uu dhawaan soo dhisay
Two people killed by unknown gunmen in Las-ano town
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Itoobiya iyo Eriteeriya ayaa u dabaaldegaya dib u furida labo meelood oo muhiim u ah isku socoda in ka badan 20 sanno kadib markii la xiray dagaalkii xadka. Boqolaal qof oo ka [...]